Qaangaadhnimada la qorsheeyey: farshaxanka khiyaanada si aad wax badan u kharash garayso ... | Qalab bilaash ah
La duugow qorsheysan waa ifafaale la yaab leh oo macaamiishu og yihiin oo ka baqayaan. Laakiin, inkasta oo ay tahay sir qarsoon, haddana waxaa jira sir badan. Intaa waxaa dheer, soo -saareyaasha nooc kasta oo badeecado iyo adeegyo ah ayaa u rogay farshaxan si ay u gaaraan faa'iidooyin badan qiimaha macaamiisha ay beddel qalabkaaga si degdeg ah.
Tani xambaarsan dhibaatooyin dhowr ah, ma aha oo kaliya midda dhaqaale ee ku qasbaysa dadka isticmaala inay maalgashi ku iibsadaan badeecooyin cusub. Waxa kale oo ay tilmaamaysaa qasaarooyin kale oo cad, sida soo saarista qashin badan iyo qashin aan haba yaraatee wax ku biirinayn nidaam waara oo bay'ada u fiican.
1 Waa maxay gabowga la qorsheeyey?
2 Noocyada gabowga la qorsheeyey
3 Faa'iidooyinka iyo waxyeellooyinka gabowga qorshaysan
4 Waa kuwee qaybaha ay saamaynayso?
5 La dagaallama gabowga la qorsheeyey
Waa maxay gabowga la qorsheeyey?
La duugow qorsheysan Waxay ka kooban tahay soo saaridda badeecado leh nolol waxtar leh oo gaaban si ay macaamiishu ugu khasban yihiin inay ku celiyaan iibsashada muddada gaaban. Xumaantan ku jirta warshadaha ma ahan mid hadda ku cusub, in kasta oo hadda ay tahay markii ugu hadal haynta badnayd. Waxaa la aasaasay qaybta muddo dheer. Xaqiiqdii, mid ka mid ah badeecadihii ugu horreeyay ee ay saameysay ifafaalahan ayaa ahaa tusaalooyinkii ugu horreeyay ee nalalka iftiinka ee Thomas Alva Edison sanadkii 1901.
Edison laftiisu wuxuu abuuray a prototype soconaya 1500 saacadood, taas oo guul u noqon doonta iibinta shirkadaha gacanta ku haya wax -soo -saarkeeda. Waa suurtogal in la abuuro nalal aad u sii raaga, hase yeeshee haddii sidaas la yeelo waxay la macno tahay inaysan iibin doonin wax badan. Phoebus Cartel ayaa sidoo kale loo abuuri doonaa in la xayiro dhammaan soosaarayaasha sameeya aaladaha soconaya in ka badan 1000 saacadood. Shirqool dhan ayaa lagu heshiiyey qaybta si jeebabkaaga loo buuxiyo oo laguu madhxiyo ...
Markaas ma jirin wacyiga deegaanka, ma jirin xuquuqda macaamilka, sidaas darteed adduunka oo dhan wuxuu bilaabay inuu ku liqo dhaqankan soconaya ilaa maanta. Intaa waxaa dheer, dhacdooyin cusub ayaa u imaan doona dhaqankan, markii ay ku fidday waaxyo kale oo badan si ay u sumayso suuqa wax soo saarka oo dhan iyo xitaa badeecadaha ama adeegyada aan la taaban karin sida software -ka.
Dhawaan, Apple waa mid ka mid ah shirkadaha ugu muhiimsan Waxay heshay iyada oo ay sabab u tahay gabowga barnaamijka ee aaladihiisa, sida iPod, ama qaar ka mid ah iPhones -kiisa, kuwaas oo xitaa cabashooyin ka keenay ururada qaarkood sida OCU.
Noocyada gabowga la qorsheeyey
Si khiyaamaysan oo u dhow daahfuran ee adeegsadaha, soo -saarayaasha iyo naqshadeeyayaasha ayaa wax walba si aad ah ugu fikiray si ay u helaan faa'iidada ugu badan waxay soo saaraan. Si kastaba ha ahaatee, xeeladaha ayaa aad ugu kala duwanaan kara badeecad kasta, iyagoo helaya dhowr noocyada duugga qorshaysan sida:
Waxtarkii qorsheysnaa ee gaboobay: waa mid saameyneysa waxqabadka sheyga aad iibsatay. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay tahay awoodda xusuusta oo yar oo waa inaad iibsataa mid ka weyn, waxqabadka CPU, awoodda matoorka, iwm.
Bulsho ama barnaamij cilmi -nafsiyeed oo la dajiyay: waxaa lagu gaaraa suuq -geynta, suuq -geynta iyo is -daba -marinta bulshada. Steve Jobs wuxuu ahaa khabiir. Waa mid ku dhiirrigelisa macaamiisha inay haystaan ​​aalad ay ku dareemaan inay qayb ka yihiin caadifadda bulshada, ama inay sameeyaan xeelado gaar ah si qofka isticmaala u maleeyo in aaladdoodii hore duugowday oo ay tahay inay beddesho. Tusaale ahaan, haysashada iPhone oo ah shay aad u qurux badan oo aqoonsi leh oo ka tirsan dabaqadda sare ee bulshada.
Hawl -gabnimo ku -meel -gaar ah oo shaqeynaya ama aan la jadwalayn. Waa mid ka mid ah kuwa ugu baahsan maanta, waana hubaal inaad maqashay tii «X ma sii ahaado sidii hore«, Inaad beddeli karto X baabuurta, qalabka, ama wax kasta ...
Waayeel aan toos ahayn: Waxay la xiriirtaa tii hore, mar haddii ay tahay mid kaa hortaagan inaad awood u yeelato inaad dayactirto badeecada maxaa yeelay ma jiraan qaybo beddelaad ah, maxaa yeelay soo -saaraha ayaa aad ugu adkeeya dayactirka, ama sababtoo ah qeybaha ayaa ka qaalisan iibsashada mid cusub.
Qaangaadhnimada jadwalka u ah iswaafajin la'aanta: waxay la mid noqon kartaa dheefta, laakiin waxay u jihaysan tahay is -waafajin la'aanta. Tusaale ahaan, markay cusboonaysiiyaan nidaamka hawlgalka oo aysan taageerin aalad oo kugu qasba inaad iibsato mid cusub haddii aad rabto inaad ku raaxaysato hagaajinta, ama deked cusub oo aan la jaan qaadi karin kuwii hore, iwm.
U fiirso Gabowga. in la joojiyo isticmaalka qaar ka mid ah waxyaabaha la isticmaalo, iwm.
Baxnaaninta deegaanka. Waana laga yaabaa inay sidaas tahay, laakiin sidoo kale way dhici kartaa in beddelkeeda ay dhaliso dhibaatooyin ka badan inta ay xalliso, tusaale ahaan soo saarista qashinka elektaroonigga ah ama qashinka elektarooniga ah. Intaa waxaa dheer, eraygan wuxuu si dhow ula xiriiraa cagaarka cagaaran ama dhaqidda wejiga cagaaran oo shirkado badani rabaan inay iska dhigaan ...
Qaybaha kale Waxay kaga duwan yihiin qalabka iyo softiweerka, sidoo kale waxay leeyihiin gabow kale, sida bilicsanaanta warshadaha moodada iyo alaabada, sababta oo ah ugu wanaagsan ka hor taariikhda ama taariikhda dhicitaanka cuntada ama daawada, iwm.
Faa'iidooyinka iyo waxyeellooyinka gabowga qorshaysan
Da'da run ahaantii la qorsheeyay ayaa leh wax yar oo macaamilka ah. Dhibaato uun bay u keentaa. Faa'iidooyinka waxaa leh oo kaliya shirkadaha iibiya badeecadan, maadaama ay yihiin kuwa ka faa'iideysta marka ay tahay inaad ka iibsato aalado cusub. Taasi waa in la yiraahdo, ujeeddadeeda kaliya waa faa'ido dhaqaale.
Si kastaba ha ahaatee, taasi waxay keenaysaa dhibaatooyinka aad muhiim u ah oo ka soo jeeda dhaqankan, sida:
Saameynta dhaqaalaha macaamiisha.
Jiilka qashinka elektaroonigga ah ama qashinka elektarooniga ah (iyo noocyada kale ee qashinka iyo qashinka la soo saaray) ee wasakhaynaya ama aan ku dambayn in dib loo warshadeeyo.
Isticmaal weyn, oo tilmaamaya ka faa'iidaysiga khayraad badan iyo warshado waara oo yar.
Waa kuwee qaybaha ay saamaynayso?
Qaangaadhnimo qorshaysan ma aha oo kaliya saamaynta dunida teknoolajiyada cusub, sida qalabka iyo softiweerka, sidoo kale kuwo kale oo badan, sida gawaarida, moodada, cuntada, warshadaha dawooyinka, iyo kuwa dheer iwm.
La dagaallama gabowga la qorsheeyey
Si loola dagaallamo gabowga barnaamijka, ballanqaad ka yimid dabaqadda siyaasadeed ayaa loo baahan yahay si loogu soo rogo cunaqabatayn kuwa ku dhaqma oo la nidaamiyo si looga hortago in la sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, dawlado badan ayaa ka caga jiidaya inay sidaas sameeyaan cadaadis dhaqaale oo kaga yimaada kooxaha cadaadiska ee kala duwan ee ku jira qaybta warshadaha ee ay saamaysay.
Isbeddelka cimilada iyo wacyiga isticmaalaha oo kordhay ayaa ka caawinaya hay'adaha qaarkood inay bilaabaan inay abuuraan sharciyo lagula dagaallamo gabowga la qorsheeyey. Kiiskan waa kan Midowga Yurub, kaas oo abuuray borotokoollo taxane ah oo ay ka faa’iidaystaan ​​macaamiisha Yurub. Tusaale ahaan, kordhi sannadaha dammaanadda, u oggolow dayactirka badeecadaha oo samee soo -saareyaasha inay ku fududeeyaan nashqadaha qaybsan iyo soo -saaridda qaybaha dayactirka muddo dheer, jaan -goynta qaybo ka mid ah (tusaale: xeedho), adeegsiga calaamad muujinaysa isku halaynta aaladaha ka caawiya macaamilka inuu doorto si ka fiican, iwm.
Waxaas oo dhan waxay si togan ugu biirin doonaan saamaynta deegaanka iyo dagaalka ka dhanka ah isbedelka cimilada, marka laga soo tago in macaamiisha laga dhigo kuwo la isku haleyn karo oo alaab lacag-badbaadin ah.
Isticmaal ahaan Waxa kale oo aad hirgelin kartaa tallaabooyin kaa caawin doona la -dagaallanka gabowga qorshaysan:
Mudnaanta siinta iibinta badeecado la isku halayn karo oo qaybsan.
Dib-u-isticmaal badeecadaha adiga oo ku iibinaya gacan-labaad ama ku deeq si aad u siiso fursad cusub.
Dib -u -warshadaynta iyo Tuurista si habboon. Tani, in kasta oo aanay si toos ah uga qaybqaadan dagaalka lagula jiro gabowga la qorsheeyey, haddana waa dhaqan wanaagsan in laga fogaado in qashinku ku dambeeyo faddarayn ama qashin -qubka aan habboonayn.
Kor u qaad dhaqanka isticmaalka mas'uuliyadda leh, bulsho ahaan iyo deegaan ahaanba.
Soo iibso badeecado fududeeya dayactirka, ha ahaato qaybo laga saari karo beddelka, ama soo-saareyaasha bixiya kaalmada muddada-dheer iyo qalabka dayactirka.
Ka taxaddar alaabtaada si aad u fidiso noloshooda waxtarka leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » General » Qaangaadhnimada la qorsheeyey: farshaxanka khiyaanada si aad wax badan u kharash garayso ...
Maqaal aad u wanaagsan! Mahadsanid!
Ku jawaab raas
Aad baad ugu mahadsan tahay akhrintaada!